New The Jeep Gladiator Ayaa Soo Saaray Qareenka Khadka Internetka
Waqtiga cusboonaysiinta: 2020-11-06 15:18:50
Nooca cusub ee soo qaadista ee Jeep Wrangler, Cusub Jeep Gladiator, horeyba wuxuu uga muuqday bogga rasmiga ah ee sumadda Mareykanka, halkaasoo ay sidoo kale ku leedahay qalabkeeda qaabeynta khadka tooska ah. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan ku dhex quusno xulashooyinka kala duwan iyo fursadaha soo qaadista cusub.
Maalmo ka hor uun, nooc cusub oo lagu soo qaado ee 2020 Wrangler baaxadda ayaa la soo bandhigay, oo muddo dheer la sugayay Jeep Gladiator, oo si rasmi ah loogu soo bandhigay munaasabadda 2018 Los Angeles Auto Show, isla munaasabaddan oo sanad uun ka hor ay lahayd Jiilka cusub ee JL ee Jeep Wrangler ayaa la soo bandhigay. Hadda waxaan ka heli karnaa Gladiator cusub websaydhka astaanta, marka lagu daro aaladda qaabeynta qaabka cusub.
Noocani cusub ee soo-qaadista wuxuu ku saleysan yahay shaqada aan xadidneyn ee jirka Wrangler, in kasta oo uu leeyahay waxoogaa lugo-gaaban ah oo ka dheer wadada caadiga ah ee waddada laga baxo. Noocani Jeep Gladiator wuxuu adeegsadaa isla Jeep Wrangler ayaa hogaaminayay nalka hore ee guriga si ay u wadaagi karaan alaab-suuqeed isku mid ah. Inta soo hartay, marka laga reebo sariirta dambe ee furan iyo madaahibta, noocani wuxuu la wadaagayaa habka farsamada oo dhameystiran inta ka hartay Wrangler kala duwan.
Xaqiiqdii, si aan la yaab lahayn, habka iyo qaab-dhismeedka cusub Jeep Kala duwanaanta Gladiator waxay aad ugu eg yihiin kuwa heerka Wrangler kala duwan. Kaydinta faahfaahinta qaarkood, labadaba waxay wadaagaan dhammaan walxaha iyo qalabka.
Xadka cusub Jeep Gladiator wuxuu ka kooban yahay hal dookh oo jidh ah, oo la beddeli karo, inkasta oo uu leeyahay xulashooyin saqaf kala duwan ah, maxaa yeelay marka lagu daro jilicsanaanta dusha sare waxaan ka helaynaa laba ikhtiyaar oo adag oo adag, sidoo kale loo kala saaray saddex walxood, sida Wrangler kala duwan. Kaydinta xulashooyinka saqafka ma helno ikhtiyaarro jidheed oo dheeri ah, xitaa sariirta dambe, maxaa yeelay waxaa lagu heli karaa hal cabir oo keliya.
Waxay ku jirtaa heerarka qalabka halkaas oo aan ka heli doonno sheekooyinka ugu horreeya, maaddaama Gladiator-ka cusub uu leeyahay 4 heerar oo dhammaystir ah, halkii uu ka ahaan lahaa 3 kaas oo soo bandhigidda Wrangler baaxadda ayaa loo qaybiyaa: Sport, Sport S, Overland iyo Rubicon. Sababo aan la garanayn awgood, gudaha Mareykanka heerka Sahara ee Wrangler waxaa loo beddelay Overland, oo ah magac kaliya lagu isticmaalo Wranglers ka baxsan Waqooyiga Ameerika, cutubyo loogu talo galay in loo dhoofiyo suuqyada.
Heerka makaanikada, xilligan waxaan kaliya ka helaynaa hal mashiin oo la heli karo, batroolka si fiican loo yaqaan ee 3.6-litir V6 Pentastar ah, kaas oo keena 289 CV (285 hp) iyo 352 Nm oo ah xaddiga ugu badan oo lagu heli karo laba gudbinta fursadaha, Buugga 6 xawaare ama 8-xawaare otomaatig ah. Qalab cusub oo liita ah oo liita 3.0-litir ah V6 ayaa gadaal lagu dari doonaa iyadoo la raaci doono 264 PS (260 hp) iyo 599 Nm oo ah tiirarka ugu badan, inkasta oo aysan jirin wax qorshe ah oo lagu darayo mid ka mid ah matoorada 4-dhululubo ee laga heli karo Wrangler kala duwan.
Previous: New Jeep Wrangler Soo qaadista Gladiator si uu ugu soo baxo Los Angeles
Xiga: New The Jeep Wrangler Isku-darka Isku-darka